လှပတဲ့ ခြေတံရှည်ရှည်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယား အမျိုးသမီးဆယ်လီ (၈)ဦး - Lifestyle Myanmar
Home Celebrity လှပတဲ့ ခြေတံရှည်ရှည်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယား အမျိုးသမီးဆယ်လီ (၈)ဦး
လှပတဲ့ ခြေတံရှည်ရှည်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယား အမျိုးသမီးဆယ်လီ (၈)ဦး
တခါတရံမှာ ခြေတံသွယ်သွယ်လေးတွေဟာ အမျိုးသမီးဆယ်လီတွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတာက လှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျစ်လစ်သေးသွယ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေက ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြနေချိန်မှာ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ခြေတံရှည်ရှည်နဲ့ ကောင်မလေးတွေအတွက်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ကြော့ရှင်းမှုရှိတယ်လို့ ဆိုရ မှာပါ။ အဆိုတော်တွေ မင်းသမီးတွေအပါအဝင် ဒီကိုရီးယား အမျိုးသမီးဆယ်လီ ၈ယောက်ဟာ အခြားနာမည်ကြီးဆယ်လီမမတွေထက် ခြေတံရှည်ရှည်လေးတွေနဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ။ တစ်ချက်လောက်ရှိုးလိုက်နော်။
1. Sunmi (110 cm)
2. Kang Sora (105 cm)
3. Choi Sooyoung (102 cm)
4. GFRIEND’s Yuju (100 cm)
여자친구 유주가 27일 오전 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 열린 KBS2 ‘뮤직뱅크'(이하 뮤뱅) 리허설을 하기 위해 방송국으로 들어서며 인사를 하고 있다. 2018.7.27./뉴스1
5. Nana (estimated longer than 100 cm)
6. Han Chaeyoung (112 cm)
7. Lee Dahee (height: 174 cm)
8. BLACKPINK’s Lisa (estimated longer than 100 cm)
လှပတဲ့ ခွတေံရှညျရှညျလေးတှေ ပိုငျဆိုငျထားကွတဲ့ ကိုရီးယား အမြိုးသမီးဆယျလီ (၈)ဦး
တခါတရံမှာ ခွတေံသှယျသှယျလေးတှဟော အမြိုးသမီးဆယျလီတှအေတှကျ ဆှဲဆောငျမှုတဈခုဖွဈလာတာက လှို့ဝှကျခကျြတဈခုတော့ မဟုတျပါဘူး။ ကဈြလဈသေးသှယျတဲ့ ကောငျမလေးတှကေ ခဈြစရာကောငျးတယျလို့ ဆိုကွနခြေိနျမှာ အရပျရှညျရှညျ၊ ခွတေံရှညျရှညျနဲ့ ကောငျမလေးတှအေတှကျကတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး ကွော့ရှငျးမှုရှိတယျလို့ ဆိုရ မှာပါ။ အဆိုတျောတှေ မငျးသမီးတှအေပါအဝငျ ဒီကိုရီးယား အမြိုးသမီးဆယျလီ ၈ယောကျဟာ အခွားနာမညျကွီးဆယျလီမမတှထေကျ ခွတေံရှညျရှညျလေးတှနေဲ့ အံ့သွစရာကောငျးတဲ့ အခြိုးအစားကို ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ။ ဘယျသူတှဖွေဈမလဲ။ တဈခကျြလောကျရှိုးလိုကျနျော။
Previous articleYeri လိုအရပ်ပုတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ Yeri ရဲ့ထသွားထလာဖက်ရှင်လေးတွေ
Next articleယောက်ျားလေးအများစုမှာ ရှိတဲ့ အကြီးမားဆုံး လျှို့ဝှက်ချက် အမူအကျင့်လေးများ